i-grinder yokutya kwenkukhu,ukutya kweenkomo,i-gross yenkukhu yokutya iyathengiswa
Inqanaba elibalulekileyo lokutyhoboza izixhobo ze ukwenza ukutya kweentlanzi. Inkqubo yokutyumza yandisa indawo engaphezulu yezixhobo eziluhlaza ezinganceda ukwandisa ukunyibilika kwesondlo kwisiselo sokugaya kunye nokukhuthaza ukugaya isilwanyana. Ngeli xesha, ubungakanani bezincedisi zezixhobo buya kuphembelela kakhulu umgangatho kunye nobunzima kwisigaba sokulungisa kamva, njengokugrumba. Njengokutyhoboza iakhawunti 50%-70% wawo onke amandla asetyenziswayo ekwenzeni umxokelelwano wepowder exutywe, ukusebenza ngokugqibeleleyo, ngomkhamo omkhulu, ichaza indleko zemveliso. Abatyalomali bayithatha njengento ebalulekileyo yokuxabisa iindleko zemveliso, umgangatho wokutya weentlanzi kunye nexabiso lokutya. I-groples yethu yomgubo wengqolowa yokutyisa inkukhu kunye nokutya kweenkomo ziyakwazi ukutshiza izinto eziluhlaza kuzo zonke izilwanyana zokutya ezenziwa ngobhongwana, njengengqolowa, isisu, amazimba, umgubo, iqhekeze ikhekhe, kunye nezinye izinto. I-grinder yomgubo wokutya kweenkomo kunye nokutya kwenkukhu yenzelwe ngokukodwa ukugaya ukutya kwezinto zeselulosi, kwaye ezo zixhobo zinomxholo ophezulu wenkunkuma kunye neoyile. Yindawo engenakuphinda ifumaneke umatshini wokutya weentlanzi ekudleni okuloba kweentlanzi, Ukuntywila kokutya okuneentlanzi kunye nenkqubo yokwenza ukutya kwesilwanyana.
1. Izinto eziluhlaza zingena kwigumbi lokutyumza nge-feed hopper kwaye zibanjwa apho de zincitshiswe kubungakanani bokuvulwa kwesikrini , kwaye kukho izando ezivuthayo ezijikeleza ngokukhawuleza kwaye kufutshane nescreen esenziwe ngefreyimu.
2. Ngaphantsi komqhubi wokuhamba komoya, Izinto ezaphukileyo zihamba ecaleni komphetho wangaphandle kwaye zinokungqubana okungapheliyo kunye nokuxabana ngokuchasene nesando, iplate enamazinyo kunye nosizi, emva koko izinto ezaphukileyo ziyaqunjelwa. Nje ukuba isuntswana ubungakanani ngezantsi isentimitha imingxunya isikrini, umgubo wokutya uya kudlula kwiscreen.
3. Ukukhupha isuntswana kwisithambisi, kwaye iimveliso zivuthuzwa ngoqhwithela kwaye zihanjiswa kwiingxowa zokugcina phantsi komkhosi wokubambisa fan.